Wararka Suuqa Maanta: Real Madrid oo Dalab Waali ah u soo Bandhigtay Salah, Xaalada Jules Kounde iyo Qodobo kale | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Wararka Suuqa Maanta: Real Madrid oo Dalab Waali ah u soo Bandhigtay...
Wararka Suuqa Maanta: Real Madrid oo Dalab Waali ah u soo Bandhigtay Salah, Xaalada Jules Kounde iyo Qodobo kale
Real Madrid ayaa u soo bandhigi doonta xiddiga khadka dhexe ee Eden Hazard oo 30 jir ah iyo lacag weeraryahanka Liverpool Mohamed Salah oo 29 jir ah (Ekrem Konur)
Wakiilka Salah ayaa u duulay Liverpool si uu wadahadal fool ka fool ah uga yeesho heshiis cusub. (Mirror)
Newcastle United ayaa liiska ku daratay weeraryahanka Borussia Dortmund Erling Braut Haaland, iyadoo 21 jirka reer Norway ay sidoo kale doonayaan Real Madrid , Manchester City iyo Paris St-Germain . (AS)
Newcastle waxay leedahay miisaaniyad qorshaysan oo ah £ 50m oo kaliya suuqs ugu horreysa ee ay leeyihiin milkiilayaashooda Sacuudi Carabiya. (Telegraph)
Barcelona ayaa qorsheyneysa inay bisha Janaayo u dhaqaaqdo 26 jirka Manchester City iyo England Raheem Sterling. (Mundo Deportivo)
Barca ayaa sidoo kale dooneysa inay la soo saxiixato xiddiga qadka dhexe ee Manchester United iyo Serbia Nemanja Matic oo 33 jir ah (Sun)
Manchester United ayaa u qoondeysay 70 milyan oo ginni suuqa kala iibsiga ee soo socda, kaasoo la heli doono ilaa iyo inta ay dareemaan inay sii wadi karaan loolanka horyaalka Premier League ee dhabta ah. (DailyStar)
Weeraryahanka Real Madrid iyo xulka Serbia Luka Jovic, oo 23 jir ah, ayaa loo doortay inuu ku beddelo weeraryahanka reer France Alexandre Lacazette, oo 30 jir ah, Arsenal . (Fichajes)
Daafaca Sevilla Jules Kounde ayaa wakiilkiisa weydiistay inuu wada xaajood la galo Manchester United , iyadoo 22 jirka reer France uu sidoo kale bartilmaameed u yahay Chelsea iyo Real Madrid . (El Nacional)
Ciyaaryahankii hore ee Arsenal Jack Wilshere, oo 29 jir ah, ayaa kula taliyay daafaca reer England Declan Rice, oo 22 jir ah, inuu iska diido dalabyada suuqa kala iibsiga ee Manchester United iyo Chelsea oo uu sii joogo West Ham . (Mirror)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Arsenal ahna kabtanka Norway Martin Odegaard, oo 22 jir ah, ayaa u furan fikradda ah inuu ku laabto Real Sociedad, sida uu yiri goolhayihii hore ee amaahda Gunners Mat Ryan, oo 29 jir ah, oo hadda ka tirsan Real Sociedad. (Mirror)
Daafaca Chelsea iyo Jarmalka Antonio Rudiger oo 28 jir ah ayaa doonaya 400,000 oo Ginni isbuucii si uu heshiis cusub ugu saxiixo Stamford Bridge. (Dailymail)
Wakiilka Robert Lewandowski ayaa sheegay in Manchester City ay tahay “meesha suurtogalka ah” ee 33 jirka reer Poland iyo Bayern Munich uu ku biiri karo. (DailyStar)
Daaficii hore ee kooxda Barcelona Dani Alves ayaa u soo bandhigay inuu dib ugu soo biiro kooxda Barcelona isagoo kula jira heshiis ‘qiimo jaban’. 38 jirka reer Brazil ayaa ah wakiil xor ah kadib markii uu dhamaaday heshiiskii uu kula jiray Sao Paolo bishii September. (AS)
Liverpool ayaa ku soo biirtay tartanka loogu jiro 22 jirka Club Bruges iyo weeraryahanka Netherlands Noa Lang oo ay weheliyaan Arsenal iyo Leeds . (Teamtalk)
Previous articleMaxay Jaamacadda Carabta ka tiri go’aankii Maxkamada ICJ ee kiiska badda Somalia?
Next articleR/W Rooble oo war cusub kasoo saaray doorashada golaha shacabka
Zinedine Zidane oo doonaya inuu markale la shaqeeyo Cristiano Ronaldo iyo...
Liverpool oo loo sheegay Qiimaha ay Bixineyso si ay u hesho...